गरे के हुँदैन ? कोरियामा चार बर्ष कमाएको पैसाले व्यवसायिक ड्रागन फ्रुटको खेती, करोडौ कमाइ ! – Khabar Patrika Np
गरे के हुँदैन ? कोरियामा चार बर्ष कमाएको पैसाले व्यवसायिक ड्रागन फ्रुटको खेती, करोडौ कमाइ !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक ११, २०७८ समय: ११:४६:३८
बाग्लुङ । पछिल्लो समय अत्यधिक बजार माग भएको ड्रागन फ्रुटको बागलुङमा समेत व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको छ ।
थापालाई यसको उत्पादन भएपछि बजारको अभाव नहुनेमा ढुक्क छन् । अहिले यसको बजार मूल्य प्रतिगोटा २०० देखि ३०० पर्ने थापाको भनाइ छ । यो फल खेतीका लागि अन्य बालीलाई जस्तो धेरै मेहनत गर्न नपर्ने र सुरुमा सिमेन्टको पोल बनाएर बिरुवा लगाई दिए राम्रोसँग सर्ने थापा बताउछन् । थापाले आगामी दिनमा ड्रागनसँगै अकबरे खुर्सानी खेती गर्ने सोचमा छन् । यो खबर साभार गरियको हो ।